सन्त कविरका मननयोग्य भनाईहरु – Sawal Nepal
सवाल नेपाल २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार १३:०३
अहिले धर्मको कुरालाई लिएर विश्व विभाजित छ । कुन धर्म सही हो, कसको विधी उचित हो, कुन सत्य हो ? यसबारे सबैको एकमत छैन । किनभने धर्म के हो भन्ने कुरामै मान्छेहरु स्पष्ट छैनन् । यसमा ठूलो भ्रमजाल विच्छ्याइएको छ । र, धर्मको नाममा अनेक धन्दा चलाइदैछ । यस्तै ढोंग, अन्धविश्वास, आडम्बर बिरुद्ध आवाज उठाउने सन्त हुन्, कविर । सन्त कविरको जन्म आजभन्दा ६ सयबर्षअघि जन्म भएको मानिन्छ । उनलार्ई विद्रोही सन्त भनिन्छ । जतिबेला उनी जन्मिए, त्यसबेला धार्मिक पाखण्डको साम्राज्य फैलिएको थियो । त्यही पाखण्डहरुको उनले उछितो काडे । उनी भन्थे, ‘वो ही मोहम्मद, वो ही महादेव, ब्रम्हा आदमा कहिए, को हिन्दु, को तुरुक कहाए, एक जिमि पर रहिए ।’ अतः यहाँ उनै सन्तको मननयोग्य भनाईहरु पेश गरिएको छ । रातलाई निन्द्रामा नष्ट ग¥यौं, सुतिरह्यौं । दिनमा भोजन गर्ने फुर्सद पनि मिलने । यो मनुष्यको जन्म हीरा समान बहुमूल्य थियो तर, तिमीले व्यर्थ बनायौं भने जीवनको मूल्य के रहन्छ ? बस एक कौडी ।
– मनलाई नै आफ्नो शिष्य, सेवक बनाउँ । र, यसैलाई ज्ञान–उपदेश देउ । अर्थात अरुलाई छाडेर आफ्नै मनलाई ज्ञान–विचारले दीक्षित गरी पवित्र बनाऔं । यस प्रकार मनलाई आफ्नो वशमा लिनुपर्छ । सारा संसार उसको शिष्य हुन्छ ।
– चन्चल मनको कुनै स्थिर मत हुँदैन । यसको जुन अज्ञातपूर्ण खराब बानी हुन्छ, स्वअध्ययन–साधनाबाट त्यसलाई छुटाऔं ।
-दुख–संकटमा पनि साधु पुरुष हतोत्साही हुँदैन । जसरी सुनलाई जति जलाइन्छ, उत्तिनै निखार आउँछ ।
-ज्ञानले मात्र के हुन्छ, जब उसको आचारणमा स्थिरता छैन भने । जसरी कागजको महल देख्नसाथ भत्कन्छ, त्यसरी नै आचरण नभएको मानिस शीघ्र पतित हुन्छ ।
-जब तिम्रो जन्म भयो, तिमी रोयौं, जगत हाँस्यो । आफ्नो जीवनलाई यसरी जिउनु पर्छ कि, जब तिमी मर्छौं, दुनिया रुन्छ, तिमी हाँस्छौं ।
-मन रंगिएको छैन, लुगा मात्र रंगायौं । आत्मभित्रको देवलाई छाडेर मन्दिरभित्रको ढुंगा पूज्न थाल्यौं ।
-मानिसको स्वभाव के हुन्छ भने, जब दोस्रोको दोष देख्छ, तब हाँस्न थाल्छ । तब उनलाई आफ्नो दोष थाहा हुँदैन ।
-यस संसारमा मानव जीवन मुस्किलले मिल्छ । यो मानव शरीर त्यस्तै हुन्छ, जसरी वृक्षकाट पात झर्छ फेरी त्यो मिल्दैन ।
-यस संसारमा आएर केवल यति सोंच कि सबैको भलो होस् । यदि संसारमा कैसँग मित्रता छैन भने, दुश्मनी पनि किन ?
-यस संसारका व्यक्तिको शरीर पंक्षी बनेको छ, जहाँ उसको मन हुन्छ, शरीर उडेर त्यही पुग्छ । सत्य यो कि, जसले जे गर्छ, उसले त्यही फल पाउँछ ।
-जब म यस संसारमा खराब खोज्न निस्किएँ, तब खराब केही पाइन । जब मैले आफ्नै मनलाई झपारेर हेरें, तब म भन्दा खराब कोही पाइन ।
-ठूल–ठूला पुस्तकको ठेली पढेर यस संसारमा कति मान्छे मृत्युको ढोकामा पुगे, तर सबै विद्वान भएनन् । तर, कोही प्रेम वा प्यारको केवल अढाईं अक्षर राम्ररी पढ । अर्थात प्रेमको वास्तविक रुपले पहिचान गर, साचो ज्ञान त्यही हो ।
-शरीरमा भगवानको बस्त्र धारण गर्नु त सरल हुन्छ, तर मनलाई योगी बनाउन गाह्रो हुन्छ । यदि मन योगी भयो भने सबै सिद्धि सहज हुन्छ ।
– कुनैपनि कुरा माग्नु मृत्यु बराबर हो । त्यसैले कसैसँग पनि भीख नमाग । आफ्नो पुरुषार्थले स्वयम् यस्ता चिज प्राप्त गर, कसैलाई माग्न नै नपरोस् ।
-कति व्यक्ति लामो समयसम्म मोतीको माला लिएर हातमा घुमाइरहन्छ, तर उनको मनको भाव बद्लिदैन । उसको मनमा जुन हलचल हुन्छ, त्यो शान्त हुँदैन । हातको यी माला घुमाउन छाड, मनलाई मोतीमा बदल्ने प्रयास गर ।